Lakkoofsi Namoota COVID-19’n qabamanii guutuu Addunyaatti Miliyoona 85 dabre - NuuralHudaa
Lakkoofsi Namoota COVID-19’n qabamanii guutuu Addunyaatti Miliyoona 85 dabre
Gabaasni Yuunivarsiitii John Hopkins irraa argame, guutuu addunyaatti lakkoofsi namoota COVID-19’N qabamanii 85,899,563 , lakkoofsi namoota du’anii immoo 1,858,412 dabru mul’isa. Haaluma kanaan lakkoofsi namoota dhibee kanaan faalamanii fi lubbuun isaanii dabru dabalaa dhufuu hordofuun biyyoonni garagaraa tarkaanfii adda addaa fudhachuuf dirqamaa jiru.
Biritaaniyaan arba’aa boruu irraa hanga jalqaba ji’a March, labsiin uggura sochii hawaasaa cimaa kan dabarsite yoo ta’u, akkasumas manneen barnootaa kan cufamanii fi barattootni mana irraa fageenyaan barnoota kan itti fufaan tahuu beeksiste.
Oostiriyaan namoota 4 kan akaakuu Vaayiresii Koroonaa haarawa Ingilaanditti argamuun labsamee fi namni tokko immoo kan akaakuu Vaayiresichaa haarawa Afrikaa kibbaatti argamen qabame biyya isiitti argamuu Ejeensiin fayyaa hawaasa biyyattii beeksise.
Chaansilerri Jarman Angeelaa Markiil kibxaata arraatti lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii fi du’anii biyyattii keessatti haalaan dabaluu hordofuun, labsiin uggura sochii hawaasaa duraan bahe kan alhada dhufu ni xumurama jedhamee eegamaa ture torban sadiif dherreessuu kan murteessite tahuu gabafame.
Afrikaatti lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii miliyoona 2.85 dabre
Ardii Afrikaatti hanga kibxaata arraatti namoonni 2,852,010 qabamuu fi namoonni 67,928 sababa dhibee kanaan du’u gabaasni wiirtuu too’annoo fi ittisaa dhibee daddarbaa Afrikaa (CDC Africa) irraa argame mul’isa.
Biyyoota ardiichaa jidduu Afrikaan kibbaa namoota Vaayiresii kanaan qabaman 1,113,349 fi namoota dhibee kanaan du’aan 30,011 galmeessuun sadarkaa jalqabaa jalqabaa irratti argamti.
Afrikaa kibbaatti aanuun Morookoon lakkoofsa namoota qabamanii 443,802 kan galmeessite yoo ta’u, Tuunisiyaa, Masri, Itoophiyaa, Liibiyaa fi Aljeeriyaan walduraa dubbaan biyyoota ardiichaa lakkoofsi namoota faalamanii 100,000 ol itti galmaa’e tahuu odeeffannoon ni addeessa.
September 27, 2021 sa;aa 9:46 pm Update tahe